प्रोत्साहन भत्ता नपाएको सुत्केरी महिलाको गुनासो – इन्सेक
रूकुम (पुर्व) ०७३ साउन २६ गते
गराइला गाविस-३ की २४ वर्षीया रिता ओलीले अस्पतालबाट पाउनु पर्ने सुत्केरी भत्ता नपाएको गुनासो गरेकी छन् ।
जिल्ला अस्पताल सल्लेमा साउन २४ गते सुत्केरी भएकी ओलीले सुत्केरी भत्ता नपाएको बताएकी हुन् । बजेटको अभावमा सुत्केरी महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन नसकिएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. मानबहादुर केसीले बताए ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेर कम्तीमा चार पटक गर्भवती परीक्षण गराएका महिलाले एक हजार चार सय र गर्भवती परीक्षण नगराई अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलाले एक हजार रूपियाँ पाउने नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला अस्पताल सल्ले रूकुमको प्रसुति केन्द्रमा ०७३ साउन १ गतेबाट साउन २६ गतेसम्म ४९ जना आमाहरूले बच्चा जन्माएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । उनीहरू मध्ये ६ जना महिलालाई अस्पतालले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको जिल्ला अस्पताल सल्ले रूकुमका निमित्त प्रमुख डा. केसीले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयबाट बजेट नआएकाले अरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाए । उनले भने-'सापटी गरेर हामीले समस्या टार्ने प्रयत्न गरेका हौं ।' महिनामा सरदर जिल्ला अस्पताल सल्लेमा ५० देखि ६० जना बच्चाहरू जन्मने गर्छन ।
साउन महिनामा गाउँका प्रसुति केन्द्रमा बच्चा जन्माएका आमाहरूले पनि भत्ता पाएका छैनन् । गाउँमा मात्रै करिव ४० ओटा प्रसुति केन्द्रहरू छन् । सरकारले आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउनका लागि गाउँ गाउँमा प्रसुति केन्द्रहरू स्थापना गरी सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउने व्यवस्था मिलाएपछि यो सेवा लिनेहरू बढेका छन् ।